Shina: Ny fandravan-trano an-tery · Global Voices teny Malagasy
Shina: Ny fandravan-trano an-tery
Voadika ny 03 Oktobra 2018 19:06 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Swahili, Français, English
Nisarika ny saina momba ny fiarovana ny zon'ny olom-pirenena sy ny famahana ara-drariny ny olana any Shina ny tranga iray nahitana ny fandravan-trano an-tery.
Ny 13 Novambra 2009, ny fandravana an-tery ny tranoben'olon-tsotra iray, araka ny baikon'ny governemanta Chengdu ao an-toerana dia nitarika ny famonoan-tenan'ny iray tamin'ny tompon'ilay trano, Tang Fuzhen, izay nandraraka solika sy nandoro ny tenany. Eo amin'ny lalana andalovan'ny tetikasa iray hampifandraisana ny lalana roa ao amin'ny distrikan'ny governemanta ny toerana misy ilay trano. Nisy ny fampitahana izany tamin'ny tranga iray nitranga tamin'ny herintaona (2008), izay nahitana ny vehivavy iray tao amin'ny distrikan'i Minhang, nanipy baomba namboarina tamin'ny solitany tany amin'ireo olona hiomanana hamotika ny tranony, izay toerana hanaovana ny foiben'ny fitaterana ho an'ny Fampirantiana Iraisam-pirenena ao Shanghai 2010.
Toerana nisy ny fonenan'i Tang Fuzhen teo aloha
Ny tranga toy izany dia antsoina hoe ‘trano nofantsihina’, izay hiresahana ireo tompon-trano mandà ny hiala eo amin'ny faritra fandravana, matetika noho ny tsy fifanarahana amin'ny fanonerana omena. Ny raharaha trano nofantsihina Chongqing tamin'ny taona 2007 ny iray malaza indrindra tamin'izany, rehefa nahavita nifanaraka tamin'ny mpandraharaha taorian'ny fifandirana tsy nahitana vahaolana nandritra ny 3 taona ny mpivady Shinoa.
Nampitaha ny famahana ny olana am-pilaminana momba ny raharaha trano nofantsihina Chongqing tamin'ny tranga nahitana herisetra tamin'ny volana lasa (Novambra 2009) tao amin'ny bilaogin-dahatsoratra, ilay bilaogera fanta-daza Wuyuesanren (五岳散人) :
Manontany tena aho raha mbola misy ny olona mahatsiaro ilay ‘trano nofantsihina mafy orina’. Tao anatin'izany tranga izany, mbola samy nanaraka ny fitsipika ny roa tonta na dia teo aza ny fifanoheran'ny mpandrava sy ny noravàna. Nisy ny tsiky ary tsy dia nisy ny fiantraikany ratsy loatra.
Saingy raha araka ny zava-nitranga vao haingana, dia toa tsy naharitra ny andaniny sy ny ankilany. Nahery setra ny fanoherana sy ny vokatra. Fotoana vitsy lasa izay, nisy kabary iray navoaka avy amin'ny manampahefana. Nilaza ilay manampahefana fa fomba ara-dalana ny fandravana an-tery , ary nanamafy mihitsy aza izy fa ilaina ny ‘fanerena goavana mba hametrahana ny fahirano’ ho an'ireo olona noterena.
Asehon'ireto ohatra ireto fa tonga hatrany amin'ny dingana izay nilaina ny herisetra ny fifanoherana nisy teo amin'ny roa tonta. Tsy manam-paharetana sy fahatsoram-po hiditra amin'ny fifampiraharahana ny andaniny matanjaka izay misitraka tombontsoa betsaka. Ny ankilany kosa izay manana ny ho very tsy afa-manoatra afa-tsy ny mampiasa fomba maherisetra kokoa ho setrin'izany. Nisy ny fitoriana tany amin'ny fitsarana tany am-boalohany saingy nanomboka nanao fihetsika mampalahelo ho an'ny tenany izy ireo ankehitriny mba hisarihana ny saina bebe kokoa.
Tao anatin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny International Herald Leader, gazety ofisialy Shinoa dia nanamarika izy fa mandalo dingana telo ny raharaha fandravan-trano an-tery ao Shina:
Amin'ny voalohany, lalana tokana ny fandehan'ny fanerena avy amin'ny mpanery ho an'ireo terena. Mbola tsy tafiditra ao anatin'ity sehatra ity ny haino aman-jery. Amin'ny dingana faharoa, mitory sy mankany amin'ny fitsarana ny iharan'ny fanerena. Amin'ny dingana fahatelo, mandratra ny tenany sy ireo mpanery azy izy ireo. Indraindray, mety hisy ny fifandonana na ny fandoroan-tena mihitsy aza.
Niresaka momba ny raharahan'ny trano nofantsihana tany Etazonia tao amin'ny bilaoginy ny bilaogera iray, Yao Hongen (姚鸿恩) mba hampitahana izany tamin'ireo tao Shina. Tamin'ny taona 2006, nandà ny tolotra 1 tapitrisa dolara Amerikana hivarotana ny tranony hananganana ny fampiroboroboana ny toerana ara-barotra any Ballard, Seattle i Edith Macefield. Rehefa maty i Macefield dia nambara fa natolony ho an'ny lehiben'ny tetikasa , Barry Martin, ilay trano noho ny fisakaizan'izy ireo sy noho ny fikarakarany an'ilay vavy antitra nandritra ny fanorenana.
Ny tranon'i Edith Macefield
Hoy i Yao Hongen:
Tsy naka mpisolovava ilay vavy antitra; tsy nitory izy; tsy nandeha tany Washington mba hanohitra izany izy; Ary, tsy ilaina akory ny milaza fa tsy nanamboatra baomba tamin'ny solitany izy na nandoro ny tenany. Ny zavatra hany nataony dia ny nilaza hoe ‘Tsia’ tamin'ny mpandraharaha.
Anisan'ireo fanehoan-kevitra izay voarain'ny lahatsoratra:
Marefo ny mponina Shinoa. Afaka mandrava izay tiany ny fanjakana, ary tsy raharahiany na tsy manana toerana honenana intsony aza ianao any aoriana! Nampiasa sora-baventy toy ny hoe ” fanarenana indray aorian'ny fandravana” ny governemantantsika mba hangalana an-keriny ny tany. Saingy anay ny tany ary manana ny taratasy momba izany izahay!
Sangisangy izany. Ao Shina, ny fanjakana no mahery indrindra sy misetrasetra indrindra. Vonoiny ireo izay manakatsakana ny lalany!
Noheveriko tsy hahita ny karazana tranga toy izao amin'ny androm-piainako aho aty Shina .